Latest Winklevoss hama' crypto bvumidzwa rinofukidza digitaalinen mutengapwe kuchengeteka - Blockchain News
Latest Winklevoss hama’ crypto bvumidzwa rinofukidza digitaalinen mutengapwe kuchengeteka
A kambani vaiva ne Cameron uye Tyler Winklevoss, havaoni of Gemini cryptocurrency Exchange, akapiwa imwe bvumidzwa nokuda hurongwa rinoedza kuvandudza rakachengeteka digitaalinen kwema.
The Chikumbiro akanga kudare muna November uye unozvipiwa neChipiri maererano U.S. Patent uye vanozivikanwa Office (USPTO). It anorondedzera “maitiro, nzira, uye chirongwa chigadzirwa nokuda processing yakachengeteka kwema mukati gore kadambari hurongwa,” pamwe Andrew Laucius, Cem Paya uye Eric Winer ainzi sezvo vavambi (Kunyange Winklevosses rwuripowo pachikwata).
ino anoshandisa ibatanidzo zvakafanana cryptographic unyanzvi, kusanganisira hashi mabasa uye digitaalinen vakasaina. Figures vanobatanidzwa application tsanangura kuti hurongwa rinotarisirwa kupa akachengeteka mugore-inobva digitaalinen twa Exchange.
Sei Coinbase ari kupomerwa overloading ari Bitcoin zvakarukwa uye sei SegWit mabasa ?
Uye vazhinji sei Coinbas ...
The regulator Swiss akakurukura zvinotarisirwa ICO
Maererano t ...
Russia anoronga kwairamba ...
Previous Post:Samsung zvino kuita ASIC Chips kuti cryptocurrency mugodhi
Next Post:Baidu anotangazve blockchain-inobva Stock papuratifomu
The Arizona House of Representatives vovhotera kuti mitero inogona vanobhadharwa cryptocurrency
TD Ameritrade ari kutsigira Bitcoin Blockchain